Destination DC dia mandefa tranonkala vaovao
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Destination DC dia mandefa tranonkala vaovao
Ny fitsidihana an'i Washington, DC tamin'ny taona 2021 dia nanome aingam-panahy ho an'ny atiny vaovao sy mahaliana ary endrika mirindra ao amin'ny tranonkala fizahan-tany ofisialin'i Washington.
"Ny tranonkalantsika dia iray amin'ireo fomba lehibe indrindra ifandraisantsika amin'ireo mety ho mpitsidika sy eo an-toerana, ary rehefa afaka herintaona izay nikatona ny dia, mety ny hanombohana ny 2021 amin'ny fijerena vaovao ny toerana haleha satria mijery ny fahasitranana isika," hoy i Elliott L. Ferguson, II, filoha sady CEO an'ny DDC, naneho hevitra momba ilay tranokala Destination DC washington.org nohavaozina.
Destination DC (DDC), ilay fikambanana ofisialin'ny marketing ho an'ny Washington, DC, dia vao nanomboka a redesigned washington.org. Ny tranonkala finday voalohany dia manome traikefa lalina ho an'ireo mpampiasa ary mitazona ny satan'izy ireo ho ivon-toeran-to hahita an'i Washington, DC mpifanolo-bodirindrina, kanto, kolontsaina, fiantsenana, fanatanjahan-tena, teatra, tranombakoka, hotely, fifampiraharahana ary vaovao momba ny tanàna. Ny developer MMGY Global dia nanome ny fahaizany tao amin'ny tranonkalan'ny mpitsidika ofisialy ho renivohitry ny firenena.
"Ireo mpampiasa ihany koa dia hahita fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fomba virtoaly sy mifanentana amin'ny tena mba hankalazana ny fahafaha-manao amin'ity taona ity satria manantena ny fisokafan'ny hetsika DC sy ny fanaovan-tsonia isan-karazany ao anatin'izany ny National Cherry Blossom Festival, 4 Jolay, DCJazzFest sy ny sisa," hoy i Ferguson.
Ireo mpitsidika ny washington.org nohavaozina dia hahatsapa fitetezam-paritra nohavaozina sy fikarohana, ary vaovao farany momba ny tanàna, ao anatin'izany ny satan'ny fitsangatsanganana farany sy ny fepetra azo antoka amin'ny orinasa mifandraika amin'ny dia. Ny tantara, sary ary horonan-tsary vaovao lava be dia be dia be dia be no mamorona traikefa ifandraisana eo amin'ilay tranonkala. Ho an'ny mpihaino fivoriambe, ireo tetikady tetikady momba ny hetsika dia mahita fihaonana nohatsaraina sy fitaovan'ny fivoriambe. Ny fivarotana hotely, fisakafoanana ary fisarihana dia natao ho an'ny mpitsidika. Ho mora amin'ny mpanao gazety ny mahazo aingam-panahy ao amin'ny efitrano fanaovan-gazety nohavaozina. Ireo mpandraharaha fitsangatsanganana vondrona dia afaka miomana alohan'ny hitsidihany miaraka amin'ny làlan-kaleha virtoaly ary, amin'ny ho avy, dia manararaotra atiny fampianarana fanampiny.
“Ny iray amin'ireo mampiavaka ity tranonkala ity dia lahatsoratra lehibe misy aingam-panahy noforonina izay navoaka im-betsaka isan-taona. Ny atiny 'Headliner', raha miresaka azy izahay, dia manasongadina izay mampiavaka an'i DC amin'ireo toeran-kafa ary mivelatra amin'ny Internet amin'ny fomba mitovy amin'ireo famoahana nomerika lehibe, ”hoy i Robin A. McClain, filoha lefitra zokiolona, ​​marketing ary serasera. “Ohatra, reharehantsika fa maimaim-poana ny tranombakoka malaza manerantany sy ny toerana manintona eto DC. Ny famolavolana vaovao dia mamela ny votoatintsika 'zavatra maimaimpoana hatao' hisongadina amin'ny fomba izay hanampy amin'ny fampidirana mpihaino marobe rehefa manomboka mieritreritra ny handeha indray izy ireo, angamba talohan'ny nanapahan-kevitr'izy ireo izay halehany, ary amin'ny farany hanome aingam-panahy azy ireo ho avy mankany DC. ”
Natao ho an'ny finday aloha ny tranokala vaovao, satria ny fifamoivoizana amin'ny Internet avy amin'ny fitaovana finday dia mitentina 60 isan-jaton'ny fivezivezena amin'ny tranokala washington.org. MMGY Global, masoivohom-barotra mivarotra manampahaizana manokana momba ny fizahantany, dia nanome fomba fijery stratejika hatramin'ny foto-kevitra hanombohana ilay tranonkala vaovao.
“Mandany atiny amin'ny finday ny mpandeha anio ary manantena ny atiny sy ny tolo-kevitra mifanaraka amin'ny hoe iza izy ireo ary inona no zava-dehibe amin'izy ireo. Tao an-tsaina ireo hevi-baovao ireo dia nifantoka tamin'ny famokarana traikefa amin'ny finday manankarena atiny izahay mba hanomezana traikefa amin'ny mpampiasa tsara ary hampahafantatra izay rehetra atolotry Washington, DC, ka namorona tranokala ho an'ny kilasy voalohany, "hoy i Robert Patterson , VP an'ny Teknolojia Marketing, MMGY Global.
Taorian'ny firoboroboan'ny fizahan-tany 10 taona tany Washington, DC, miaraka amin'ireo mpitsidika 24.6 tapitrisa amin'ny taona 2019, dia antenaina hidina 53 isan-jato ny fitsidihana amin'ny taona 2020 noho ny areti-mandringana, hoy ny fizahana toekarena momba ny fizahan-tany. Tamin'ny taona 2019, ny fizahan-tany dia mitentina 8.2 miliara dolara amin'ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika ary 896 tapitrisa dolara amin'ny fidiram-bola eo an-toerana. Tamin'ny Desambra 2020, ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika dia nidina 79 isan-jato, na $ 4.9 miliara, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa, hoy ny fizahana toekarena momba ny fizahan-tany.
Raha vantany vao manomboka ny areti-mandringana ary afaka manomboka amin'ny laoniny amin'ny laoniny, ny tranonkala nohavaozina dia fitaovana voalohany hampirisihana ireo mpitsidika mety ho tonga. Ny asan'ny DDC hanentanana ny fitsidihana dia manome tombony mivantana ny toekarena eo an-toerana sy ny mponina ao amin'ny Distrika amin'ny alàlan'ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika, ny vola miditra amin'ny hetra ary ny asa eo an-toerana.
"Ny ekipanay dia natokana hampiroborobo an'ity tranonkala ity nandritra ny taona tena nanahirana satria ny tanàna sy ny firenena dia niatrika ny areti-mandringana, ny tsy rariny ara-poko ary ny fikomiana tao amin'ny tranon'ny US Capitol herinandro vitsivitsy lasa izay," hoy i McClain. "Rehefa nahita ny fifandimbiasam-pahefana milamina izahay nandritra ny fitokanana dia hohamafisinay i Washington, DC ho toerana fizahan-tany am-pilaminana ny fizahan-tany fanoherana, miaina ny tantara ary hampihatra ny zonao fanitsiana voalohany."
Ny famelomana ny tranokala dia mifanojo amin'ny fankalazana mamirapiratra sy antony maro hitsidihana an'i Washington, DC amin'ny 2021 rehefa afaka manomboka indray ny dia. Nomena faktiora ambony ny tanàna ao amin'ny "The Best Places to the World: The 2021 Gold List" by Condé Nast Traveler, ary nomen'ny The Points Guy ny iray amin'ireo "12 faritra mafana indrindra tamin'ny 2021" ary koa iray amin'ireo "Tsara indrindra Toerana 2021 ”avy amin'i Frommer's. Amin'ny 2021, hotely vaovao telo no hisokatra ao Washington, DC: The VEN ao amin'ny Embassy Row, Kimpton Banneker ary ny hotely Cambria Washington DC Capitol Riverfront. Amtrak, ny lalamby mpandeha lavitra iraisan'ny firenena lavitra any Etazonia, mankalaza 50 taona amin'ny 2021. Anisan'ireo tsangambato ara-javakanto sy kolontsaina ny faha-175 taonan'ny Smithsonian Institution, tsingerintaona faha-125 an'ny rafitra DC Public Library, tsingerintaona faha-100 an'ny The Phillips Fanangonana sy tsingerintaona faha-50 an'ny Kennedy Center.
Abu Dhabi dia nanambara ny lisitry ny toeran 'Green List' nohavaozina
India hanolotra mari-pankasitrahana vaksinin'ny COVID-19 ho an'ny mpizahatany